Tag: fizarana tsenan'ny media sosialy | Martech Zone
Tag: fizarana tsenan'ny media sosialy
Fotoana iray hikarakarana ny teti-dratsy amin'ny teti-dratsy momba ny varotrao
Alarobia, Martsa 21, 2018 Alakamisy Febroary 25, 2021 Douglas Karr
Indraindray dia zava-dehibe ny famerenanao ny paikadinao amin'ny varotra. Miova ny fitondran-tenan'ny mpanjifa rehefa mandeha ny fotoana, miova ny paikadin'ny mpifaninana aminao rehefa mandeha ny fotoana, ary miovaova ny sehatra marketing nomerika rehefa mandeha ny fotoana. Tonga ny lohataona, ary izao no fotoana mety indrindra hameloman'ireo marika ny ezak'izy ireo amin'ny marketing nomerika. Noho izany, ahoana no hamonganan'ny mpivarotra ny korontana amin'ny tetikady marketing? Ao amin'ny sary vaovao MDG, ho fantatry ny mpamaky izay tetika nomerika taloha sy reraky ny fanariana an'io